China Executive nguSihlalo Office mveliso kunye nabathengisi | KUMHO
Igumbi lethu lokubonisa
Isitulo esijikelezayo esiphakathi; ukubuyela umva nge-Korea mesh entsonkothileyo; I-Annular shape C imilo) i-armrest ye-aluminium eqinileyo kunye ne-PU pad; Ukuxinana okuphezulu kwesihlalo sesiponji esenziwe ngelaphu, kunye nokuhlala ngokutyibilika; Inkqubo ye-Bock ene-5 yokutshixa indawo kubandakanya ukutshixa ixesha langaphambili; I-340MM isiseko se-aluminium esikhanyisiweyo, iklasi ye-KGS 4 yokurhafisa nge-60MM PU caster
Igama lebrand: Iifowuni
Indawo yokuQala: Guangdong, China
Isiqinisekiso: Iminyaka emi-5
Enemingxuma: Ngwevu, Mnyama, Bomvu, Luhlaza
Isihlalo: Ngwevu, Mnyama, Bomvu, Luhlaza
Isakhelo: Mhlophe, Mnyama
Ukuba lilungu lePalo Alto Design Group ngo-Okthobha u-1995 uChen wazuza amava olawulo kunye namava olawulo kwi-Palo kunye neFlextronics International. ibanjwe yiMunich, iJamani kunye neSan Francisco, e-USA, u-Chen wayiphucula imveliso kwishishini lemveli neqela lakhe.Ngombono wakhe "Isazisi seMveliso yeXabiso", u-Chen uncedisa amashishini kwimveliso evelisa imveliso kwakhona, achaze ulwalathiso lophuhliso lwemveliso, kunye nobungakanani bexabiso lentengiso. uphawu. Kumashumi eminyaka adlulileyo, ngomoya ka "Uyilo olonwabileyo", uyilo lukaChen lwalugubungela iinkalo ezahlukeneyo kubandakanya ukubonakala kwekhompyuter, iimveliso zeFotoelectric, imveliso ye3C, iimveliso zasekhaya kunye nefenitshala. Ngo-Epreli ka-2006 nango-2007, u-Chen wamenywa ukuba athathe inxaxheba kwiMboniso yoYilo lweFenitshala yamazwe aphesheya eMilan, kwaye neqela lakhe yayiyekuphela kweqela elalimenyelwe eTaiwan ngembeko.
Ngo-2010, u-Chen uyile umsebenzi omangalisayo ongapheliyo kwi-Mainland China, HongKong naseTaiwan. "Ukuphila ubomi" kuthetha ukuhlala kwaye wonwabele ubomi bakho endaweni yokuphila. I-China ikhula ngesantya esothusayo. Abantu abasazabalazeli ukuhlala njengangaphambili. Sinethemba lokuba nendawo yokusebenza efanelekileyo kwaye intofontofo. Ndizama ukuthi, ekuchazeni le fashoni, ishishini liphela kufanele ukuba lazi utyekelo, ukuvelisa iimveliso ezinokwenza abantu bazive beshushu.Le yinjongo sonke ekufuneka siyifumene.
Ubumnandi obutyebileyo boMzimba
Umdibaniso womgca ogudileyo kunye nembonakalo yeklasi inika umgangatho wayo omfutshane.
Umdibaniso womqolo odityanisiweyo ubumba isitayile sawo.Umgangatho ugxininiso nge-aluminium armrest.
Intloko eguqulwayo kunye ne-lumbar zihambelana kakhulu nentshukumo yomzimba womntu, ukunciphisa ukudinwa kunye nokungonwabi ngexesha lomsebenzi.
Ingqondo yoyilo oluGreen
Ulwakhiwo olwenziwe lula luyacutha ukuveliswa kwenkunkuma.
Ukucinga, ukuphumla, ukunxibelelana.
Uyilo lweMinimalist lwaphula imida yokucinga, ukudala umbono wokhuthazo
Ukuqala kwincoko enesithuba, i
Ubuhle bangaphakathi bukhiwe kulwalamano lwenqaku, umgca kunye nomphezulu.
Egqithileyo USihlalo wabasebenzi beMesh
Okulandelayo: I-Flexible Lumbar Support uSihlalo we-Ofisi
Isihlalo Sokuxhasa Ngasemva
Izitulo zeOfisi enzima
Ifanitshala yeOfisi yanamhlanje
Usihlalo weOfisi yeMesh yabantu abaNzima
USihlalo weOfisi eLawulayo ye3D Armrest
Sihlalo we-PU yoBuso we-Ofisi
Inkxaso ye-Ergonomic Chair
Umgangatho oPhezulu weSihlalo seOfisi yoMgangatho oPhezulu